Stefan Löfven: “Suuragal maahan in Hangari diido heshiishyaddii Midowga Yurub” | Somaliska
Ra’iisal wasaaraha dalkaan Iswiidhan Stefan Löfven, ayaa gaashaanka u darruuray go’aanka uu dalka Hangari ku diiday wax ka qabashada qalalaasaha muhaajirinta ee Yurub ku soo qul qulaya ee dalkiisa kaga aadan.
Hadalkan ayuu ra’iisal wasaaruhu sheegay mar uu kulan maalintii shalay aheyd la qaatay dhigiisa dalka Burtgaal Antonio Costa oo socdaal ku yimid magaaladda Stockholm ee caasimadda dalka Iswiidhan.
Stefan Löfven, ayaa sidoo kale tilmaamay in dalkaasi Hangari saami qeybsiga arrimaha taagan ee ka soo gaaray uu yahay kan ugu fudud ee dal xubnaha ka ah la siiyo, saas oo ay tahayna buu yiri natiijadii codbixinta ee dalkaasi laga qaaday a98% ahaa mid u dhacay sida dowladdu dooneysay oo ah inaan dib loogu soo celin qaxootigii horey u soo maray balse ka door biday ineey dalalka ee Midowga Yurub u sii gudbaan.
“Muhiim ma ahan inta codka diidmadda u qaaday ee waxaa muhiim ah dhamaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub la yimaadaan go’aan xal looga gaaro dalkii saamigiisa ku soo aaday masuuga” ayuu yiri Löfven oo walaac ka mujiiey go’aanka dalkaasi Hangari ku diiday in aan muhaajirintii horey u soo maray dib loogu soo celin.
Dalka Hangari oo ka mid ah dalalka Midowga Yurub ayaa dhawaan waxaa uu diiday in dib loogu celiyo qaxootiga dalalka Iswiidhan iyo Jarmalka ay diideen ineey siiyaan magangalyo, taasoo ay dalalkaasi qudhoodu ku doodeen in cahdigii ama heshiish-kii Dublin uu dhigayo in dalka ugu horeeysa ee qofka muhaajirka ah ka dalbado magangalyo uu mas’uuliyadeeda qaadayo. Hase ahaate Hangari oo ah dal ku sifoofay neceyb ka dhan muhaajirinta gaar ahaan muslimiinta ayaa ka soo horjeestay cahdigii dalalka bahwadaagta ah u yaalay.